Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Maanta Kulan Laqaatay Bulshada Rayidka Ah Ee Magalada Boosaaso – Radio Daljir
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Maanta Kulan Laqaatay Bulshada Rayidka Ah Ee Magalada Boosaaso
Oktoobar 25, 2016 8:23 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gelinkii danbe 25 October 2016 kulan la qaatay isimada , cuqaasha , waxgaradka , aqoon yahanka iyo ganacsatada xarrunta ganacsiga ee magalada Bosaaso.
Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa kulanka uu la qaatay bulshada rayidka ah ee gobolka Barri waxaa ku weheliyey gudoomiha Gobolka Barri, mudane Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo), Duqa degmada Bosaaso Egn. Yasiin, ku xigeenkiisa iyo Saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda Puntland.
Kulankan balaadhan ee uu maanta madaxweynaha dawladda Puntland laqaatay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ayaa wuxuu ku saabsanaa xog waran xaaladaha dalka ka jira iyo sidii abaaraha baahsan dadka ay sameeyeen loogu gurman lahaa.
Madaxweynaha dawlada Puntland oo kulanka furay ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed, dhaqaale, horumarumarrinta kabayaasha dhaqaalaha iyo difaaca xuduudaha dawlada Puntland, iyo sidoo kale sidii si wada jira laysaga kaashanlahaa difaaca iyo midnimada jiritaanka ummada Puntland.
Madaxweynaha dawladda Puntland oo sifaah faahsan uga hadlay horumarrinta kaba yaasha dhaqalaha dalka ayaa sharaxaad dheraada ka bixiyey dhamystirka wejiga labaad ee garoonka diyaaradaha ee magalada Bosaaso, balaadhinta dekeda magalada Boosaaso, mashruuca biyo gelinta ee magalada Bosaaso. wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo, dayactirka wadada Garoowe-Gaalkacayo iyo garoonka diyaradaha ee magalada Garoowe oo heer gebogebo ah maraya.
Madaxweynaha dawladda Puntland oo si dhow uga hadlay mashruuca biyo gelinta magalada Boosaaso oo ay ku baxayso dhaqaale gaadhaya 30 malyan oo lacagta midowga Yurub ah ayaa waxaa uu tibaaxay in sababta mashruucasi loo fulinayo ay tahay sidii dadku u heli lahayeen biyo ku filan oo nadiif ah.
Dhinaca kale madaxweynaha dawlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayey ladagaalanka kooxaha argagixisada ee kadagaalama buuralayda galgala iyo adkaynta difaaca xuduudaha Puntland ayaa sheegay in loobahan yahay in dawladda iyo shacabka oo isku duuban in ay si wadajira uga hawlgalaan difaaca dalka, welibana loo baahan yahay in cadawga dawladda Puntland meel looga soo wada jeesto.
Isimadii, cuqashii, waxgaradka iyo aqoon yahanka uu madaxweynuhu kulanka la yeeshay ayaa dhankooda soo dhoweeyey kulanka xog warranka ah ee ay madax weynaha la yeesheen isla markaana sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarka iyo difaaca dawladda puntland.
Ugu danbayn madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isimadii, cuqashii iyo waxgaradkii kulan ka kasoo qayb galay uga mahad celiyey kasoo qayb galka kulanka ayaa kula dardaarmay ahmiyada ay leedahay xasiloonida, nabada, horumarinta dhaqaalaha iyo difaaca xuduudaha Puntland isla marahaantaana tibaaxay inay tahay muqadas ilaalinta sharafta iyo karaamada dadka iyo dalka Puntlad.
Dhagayso Afhayeenka Hiiraan oo ka warbixiyay khasaarihii Qaraxii lala eegtay ciidanka Jabbuuti
Dhagayso Barnaamijka Saakay iyo Dunida Arbaco Oct 26 2016 – Wariye Cumar Laki Man Studio Daljir Caabudwaaq